DegDeg: Gudoomiyihii Komishanka oo si Adag uga jawaabay Eedaymaha Mucaaridka, Cirro na baaq u Diray - Wargane News
Home Somali News DegDeg: Gudoomiyihii Komishanka oo si Adag uga jawaabay Eedaymaha Mucaaridka, Cirro na...
DegDeg: Gudoomiyihii Komishanka oo si Adag uga jawaabay Eedaymaha Mucaaridka, Cirro na baaq u Diray
Komishanka Doorashooyinka Qararanka (KDQ) ayaa jawaab deg deg ah ka bixiyey Eedeymo Mucaaridku u jeediyey, sheegayna inay dacwad la tiigsanayaan cidii been abuurka samaysay.
Guddida Doorashooyinka Qaranka, ayaa ka jawaabay eeddeymo xisbiga Mucaaridka ah ee WADDANI u jeediyey oo la xidhiidhay inay ka shaki saari waayeen waraaqo lagu codeeyey Gobolka Gabiley iyo goobo kamid ah Degmooyinka Hargeysa.
“Dacwad ayaanu ka qabnaa oo kaga hadhi mayno cidii keentay Waraaqaha beenta ah ee Telefishanada laga baahiyey. Waxaanu leenahay waxba kama jiraan waraaqahaas, cidii keentayna waxay ceeb u gaysteen Qaranka Somaliland iyo Doorashada” sidaas ayuu yidhi Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo goordhaweyd Warbaahinta kula hadlay Xafiiska Guddida ee Hargeysa “ Xisbiyada waxaanu u sheegaynaa inaanu mar walba diyaar u nahay cabashooda iyo la-tashigooda, albaabkayaguna wuu idiin furan yahay mar walba” ayuu raaciyey.
Murrashaxa Xisbiga WADDANI, ayaa sheegay in Xisbigiisu hakiyey la-shaqeyntii Guddida, kaddib markii jawaab laga siin waayey cabashooyin ay gudbiyeen.
Guddida ayaa sheegtay in sanaaduuqdii codbixinta badankoodii soo xeroodeen, xubnihii Guddida ee Gobolada joogayna ugu dambeyn beri soo wada gelayaan caasimada, qaarkoodna ay maanta yimaadeen.
Inkastoo la filayey in natiijada Doorashada lagu dbawaaqi doono maalinta Jimcaha ee Bari, haddana waxa ay Guddidu sheegeen inay shacbigu isdejiyaan oo aanay ku jahawareerin warar aan jirin.
Intii aanay Guddidu hadlin taageerayaasha Xisbiga WADDANI, ayaa mudaharaad rabshad wata ka sameeyey qaybo kamid ah Magaalada Burco.
Guddida ayaa ku baaqday inaan nabad-gelyada iyo xasilloonida meel lagaga dhicin, qas iyo dhibaatona aanay shacbigu ku kicin.
Doorashada Isniintii dhacday, ayaa lagu qiimeeyey middii ugu wanaagsanayd ee ka dhacday Afrika, iyadoo waxyaabaha aadka loogu amaanay ay kamid tahay sida looga ilaaliyey farsamo kasta oo wax is-daba marin lagu sameyn karo, ama ku shubasho iyo laba jeer codeyn.
Komishanka Qaranka Doorashooyinka
Somaliland: Xubno Saraakiil Ciidan Iyo Xildhibaano Iskugu Jira Oo Ka Socda Maamulka Puntland Oo Ku Sugan Deegaanka Widh-widh Ee Gobolka Sool Iyo Ujeedada Socdaalkooda
Somaliland: Siyaasi C/qaadir C. Obsiiye Oo Sheegay in Siyaasadda Xisbiyadu La Mid Tahay Tii Siyaad Barre, Isbeddelna Aanay Keenayn
Ukraine: Dawladda oo meel marisay shuruuc adag